Etu esi dee akwukwo
Akwụkwọ na-ebipụta oge niile nwere uru nke ịpịpụta isi okwu ha na aha ha site na iji nkọwa ma ọ bụ nkọwa dị ike. Na mpaghara dijitalụ, okomoko ndị ahụ anaghị adịkarị. Ọdịnaya onye ọ bụla yiri nke yiri Tweet ma ọ bụ Nsonaazụ Nchọgharị. Anyị ga-ejiderịrị anya ndị na - agụ akwụkwọ ji ọrụ n'aka karịa ndị na - asọmpi ha ka ha wee pịa ma nweta ọdịnaya ha na - achọ.
Ná nkezi, ugboro ise ka ọtụtụ mmadụ na-agụ isi okwu ka ha na-agụ nke ahụ. Mgbe idere ederede gị, i jiri 80 cents site na dollar gị.
David Ogilvy, Nkwupụta nke Nwoke Mgbasa Ozi
Rịba ama na ekwaghị m esi dee clickbait, ma ọ bụ otu esi eme ka ndị na-agụ akwụkwọ pịa. Oge ọ bụla ị mere nke a, tufuo ntụkwasị obi siri ike nke onye na - agụ ya. Na ntụkwasị obi bụ ọchịchọ nke ndị ahịa ọ bụla chọrọ ịzụ ahịa na onye na-agụ ha. Ọ bụ ya mere ọtụtụ saịtị clickbait anaghị ere ihe ọ bụla mana ad. Ha choro onu ogugu iji bulie onu ogugu ha, obughi ntụkwasị obi nke ndi nleta ahu.
Salesforce Canada ewepụtala infographic, Etu esi ede akwukwo ndi n’agha nke choro nlebara anya. N'ime ya, ha na-ekwu maka iji usoro ndị a.
EGO SHINE ofzọ Ederede Ezi Aha
S - Nwee kpọmkwem banyere isiokwu ị na-ede banyere ya.
H - Nwee na-enye aka. Ime ka ndị na-ege gị ntị baara uru na-eme ka okwukwe na ntụkwasị obi ha nwere na gị dị ka ikike.
I - Nwee ozugbo na-akpali. Ndenye isiokwu zuru ezu na isiokwu anaghị egbutu ya.
N - Nwee akụkọ. Ọ bụrụ na onye ọzọ edeela ederede ka mma, kesaa nke ha ma chekwaa oge gị!
E - Nwee ụtọ. Ire okwu na ụlọ ọrụ lingo ga-eme ka ndị na-ege gị ntị hie ụra.
Ihe omuma ihe na-akwado CoSchedule's Blog Post Isi okwu nyocha, nke nyere m B + na isi okwu a. Akara a dị elu n'ihi nke a Olee otú mmewere. Mkpokọta akara dabere na ha Uru Marketingre ahịa mmetụta uche algọridim nke na-ebu amụma otu a ga-esi kesaa isi isiokwu ahụ dabere na okwu eji eme ihe.
Otu ụzọ aghụghọ dị mfe nke ndị ode akwụkwọ ukwu na-aga n'ihu na-egosi m na-arụ ọrụ bụ otu esi etinye aha gị n'okwu gị ma ọ bụ nke gị nke mere na a manyere gị ịgwa onye na-agụ ya okwu ozugbo. Gwa onye na-agụ ya okwu ozugbo ga-edozi ahụmịhe ahụ ma wulite njikọ dị n'etiti gị na onye na - agụ ya, na - agba ndị na - agụ akwụkwọ gị ume pịa site na iji gụọ ndị ọzọ.
Tags: pịa-site ọnụegoclickbaitnjikọ akaụtọakụkọna-enye akaotúesi dee ahaesi dee ahainfographicna-akpaliakụkọndị ahịandị ahịa canadansonaazụ nsonaazụ ọchụchọagwona-enwukpọmkwemutu ahaide ederedeide aha
Onyinyechi ugochukwu (@onyinyechi)
Jul 11, 2016 na 9: 53 AM
Nnukwu ndụmọdụ, Douglas! Ị ma nke mere? M na-ejikwa ngwá ọrụ ndị dị ka HubSpot Top Generator ma ọ bụ Blog Generator nke BlogAbout - ha na-enyere m aka ịkọwa isi okwu dị na mbụ nke na-adọrọ ndị na-agụ ya ntị. Nwere ike ịhụ ụfọdụ ihe atụ ederede nke ngwa ọrụ ndị a na blọọgụ m http://www.edugeeksclub.com/blog .
Site n'ụzọ, Anaghị m anụ banyere nyocha isi okwu - aga m eji ya n'ọdịnihu.